DHEGEYSO-Warbixin xiisabadan oo aan ka diyaarinay doorashada Soomaaliya. – Radio Daljir
Agoosto 7, 2016 11:54 g 0
Boosaaso, Aug, 08 2016-Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka dadban ee dalka ayaa maalinimadii shalay ku dhawaaqay Jadwalka doorashada Soomaliya ka dhacaysa sanadkaan 2016-ka.
Mudane Cumar Maxamed Cabdulle Dhegey oo ah Gudoomiyaha Guddiga Hirgelinta doorashada dadban ee dalka oo maanta shir Jaraaid ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Doorashada xubnaha Aqalka sare ee dalka ay dhacayso 25 September sidoo kale Doorashada Xildhibaannada waxay dhacaysaa 24 September-10 October.
Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa la shaaciyay in dhacayso 25 October Ugu danbeyntii gudoomiyaha ayaa cadeeyay in Doorashada Madaxweynaha ay dhacayso 30 October. Aamina Ladan Axmed Cali ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka diyaarisay.